Soomaali / Fasalka Caruurta yar yar (Kindergarten)
Diiwaangelinta canuggaada waxay u fududahay sida 1…2...3!
1. Canuggaaga u Dhammaystir Tallaalada
Ammaanka dhammaan caruurta darteed, sharciga gobolka MN wuxuu kaa rabaa caddayn qoraal ah in canuggaaga laga tallaalay:
5 DTP (Gawracato, Teetane, & Xiiqdheer)
2 MMR (Jadeeco, Qaamo-qashiir, Jadeecada Jarmalka)
Taxane ah 3 Cagaarshowga B iyo 2 Busbus
Diiwaanka talaalada waa in loo soo celiyaa kalkaalisada caafimaadka ee iskoolka canuggaaga ugu dambayn 15ka Agoosto. Haddii ay jirto sabab caafimaad oo canuggaaga aan loo tallaalayn, waxaa loo baahan yahay qoraal saxiixan oo ka yimid takhtarkaaga ama rugtaada caafimaad. Qoysaska diida tallaalada waa in ay keenaan foom ka tanaasulid ee nootaayaysan (lagana helo meesha aad iska diiwaangelinayso).
2. Dhamaystir Baaritaanka Xanaanada Ka Hor
Sharciga gobolka MN wuxuu dhammaan caruurta gelaysa xanaanada ee iskoolada bulshada waajib kaga dhigayaa Baaritaanka Xanaanada Ka Hor. Waxay ugu fiican tahay, in canuggaagu uu dhammeeyo baaritaankan marka da’diisu u dhexayso 3 ½ iyo 4.
Haddii canuggaagu UUSAN dhamaystirin baaritaankan LACAG LA’AANTA AH, fadlan la xiriir Waxbarashada ka Horaysa Xanaanada 320-370-8250.
3. Hel Goobta Diiwaangelinta ee Xanaanadaada
Isdiiwaangelinta xanaanadu waa mid loo baahan yahay. (Waa isdiiwaangelin ka duwan kuwa ah iskoolka ka hor iyo Baaritaanka Xanaanada ka Hor.) Caruurtu waa imaan karaan, laakiin lagama rabo in ay yimaadaan. Marka aad canuggaaga diiwaangelinayso fadlan la imaw warqadda dhalashada ama dukumiinti la mid ah oo caddaynaya da’da.
Marka aad timaadid goobta isdiiwaangelinta waxaad….
Buuxin doontaa foomamka isdiiwaanglelinta (waxaad kaloo ka heli kartaa interneetka
Baran doontaa barnaamijyo dheeraad ah oo aad dooran kartid oo ay ka mid yihiin:
Barnaamijka Af Qalaad Wax Ku Baridda Shiinaha
Barnaamijka afka Qalaad Wax Ku Baridda Isbaanishka
Akadhemiyada af Ingriiska (oo loogu talagaly ardayda aan af Ingiriiskoodu fiicnayn)
Heli doontaa macluumaad ku saabsan
Manhajka waxbarashada xanaanada
Tallaalada loo baahan yahay
Dhacdada kulanka furitaanka guga (spring open house)
Barnaamijyada iskoolka ka dib